Farmaajo oo khudbad ka jeediyey shirka Nairobi – Puntland Post
Posted on November 12, 2019 November 12, 2019 by Liban Yusuf
Farmaajo oo khudbad ka jeediyey shirka Nairobi
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta khudbad ka jeediyey shirka caalamiga ah ee horumarka iyo dadweynaha oo ka furmay magaalada Nairobi.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la wadaagay madaxda, masuuliyiinta iyo ka qeyb galayaasha shirkan dhibaatooyinka sinnaan la’aaanta dhanka bulshada ee adeegyada dadweynaha iyo dhaqaalaha, waxa uuna adkeeyey mowqifka joogtada ah ee dowladda Soomaaliya ay ka taagan tahay taageeridda olalaha caalamiga ah ee lagu xaqiijinayo horumarka iyo hiigsiyada barwaaqo-geynta dadweynaha.
“Waa inaan aqbalnaa in ay jiraan caqabado aan wadaagno oo ku aaddan hirgelinta koboc dhaqaale oo loo siman yahay, bixinta adeegyo dadweyne oo la heli karo iyo fursad u abuuridda dhallinyarada adduunka oo badankood ay ku nool yihiin qaaradda Afrika.” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa soo bandhigay kororka muuqda ee tirada dadka Soomaaliyeed ku yimid sanaddihii dambe, waxa uuna xusay fursadaha horumarineed iyo dhaqaale ee ugu jira arrinkan dowladnimada Soomaaliya, maadaama tirada ugu badan ee shacabku ay yihiin dhallinyaro u hanqal-taagaaya sidii dalkoodu uu ula tartami lahaa dalalka caalamka ee horumarsan.
“Waxa aan garawsannahay baahida loo qabo in si degdeg ah loo taageero dhallinyaradeenna si kororka dadweyne aan uga faa’idaysanno dhanka xasilloonida iyo abuuridda fursado loo siman yahay.” ayuu mar kale yiri Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa si faahfaahsan uga warbixiyey doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin nabadeynta iyo dib u dhiska dalka, isagoo soo bandhigay fursadaha siyaasadeed iyo kuwa dastuuriga ah ee soo jireenka ah oo ay ku tilmaaman yihiin haweenka Soomaaliyeed.